न्यूज सञ्जाल: » कोमामा छन् किम जोङ उन, बहिनीले सत्ता सम्हाल्ने !
कोमामा छन् किम जोङ उन, बहिनीले सत्ता सम्हाल्ने !
न्यूज सञ्जाल ८ भाद्र २०७७, सोमबार ०९:०४
झापा (एजेन्सी) । उत्तर कोरियाली शासक किम जोङ उनको स्वास्थ्यबारे पुनः एकपटक चर्चा भइरहेको छ । दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति किम डे–जंगका अधिकारी भइसकेका पूर्व कूटनीतिक चाङ्ग सोङ्–मिनले किम जोङ उन कोमामा भएको दाबी गरेका छन् ।
वास्तवमा पछिल्लो केही समयदेखि किम जोङ उनको स्वास्थ्यबारे विभिन्न अड्कलबाजी र दाबी गरिएको थियो तर उनी अचानक सबैको अगाडि स्वस्थ रुपमा देखापरे । अब दक्षिण कोरियाका पूर्व कूटनीतिज्ञद्वारा यस्तो दाबी गरिएपछि उनको स्वास्थ्यबारे पुनः चर्चा सुरु हुन थालेको हो ।
डेली मेलको एक रिपोर्ट अनुसार स्थानीय मिडियासँग कुराकानी गर्दै दक्षिण कोरियाका पूर्व कूटनीतिज्ञले किम जोङ उन कोमामा भएको तर उनको जीवन अन्त्य भने नभएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार किमका ३३ वर्षीया बहिनी किम यो–जोङ दाइका केही शक्तिसहित सर्वोच्च पदमा रहेकी छिन् ।
‘अहिले नै एक पूर्ण उत्तराधिकार संरचनाको गठन नगरिएका कारण उनकी बहिनीलाई अगाडि सारिएको हो,’ उनले भने ।
किमले बिहिबार सरकारी कार्यक्रममा आफ्नो उपस्थिति जनाएको तस्बिर उत्तर कोरियाली मिडियाले सार्वजनिक गरेता पनि चाङले यस्तो दाबी गरेका हुन् । यद्यपि, रोयटर्सका अनुसार उक्त तस्बिर स्वतन्त्ररुपमा पुष्टि हुन नसक्ने बताएको छ ।
अघिल्लो हप्ता किम जोङ उनले आफ्नी बहिनीलाई सत्ताको दोस्रो स्थान प्रदान गरेको दाबी गरिएको थियो । उत्तर कोरियाको अर्थव्यवस्थाको विषयमा किम जोङ उन असाध्यै तनावमा भएको र यसैकारण उनले अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आफ्नी बहिनीलाई दिएको खबर प्रकाशित भएको थियो ।
३६ वर्षे किम जोङलाई यसवर्ष सार्वजनिक कार्यक्रममा निकै कम देखियो । अप्रिलमा उनको मुटुको शल्यक्रिया गरिएको र उनको स्वास्थ्य अत्यधिक नाजुक पनि बताइएको थियो । कतिले त उनको मृत्यु नै भइसकेको अनुमानसमेत गरेका थिए ।
यी खबर तथा अनुमान त्यतिबेला फेल खायो जब मे महिनामा उत्तर कोरियाली शासकले एक कारखानाको उद्घाटनको क्रममा रिबन काटिरहेको तस्बिर सार्वजनिक भयो ।
भारतमा कोरोनाबाट एकैदिन ३६ सय बढीकाे मृत्यु, ३ लाख ८६ हजार बढीमा सङ्क्रमण
१७ बैशाख २०७८, शुक्रबार ०८:४७